Mụta iji iPhone 6 Plus jiri otu aka | Esi m mac
Muta otu esi eji iPhone 6 Plus Otu aka
Ọbịbịa nke iPhone 6 Plus bụ nnukwu ihe ọhụụ n'ọtụtụ akụkụ, mana otu n'ime ihe ndị masịrị ndị mmadụ bụ nnukwu ya, ebe ọ nwere ihuenyo 5,5 nke anụ ọhịa na nke ahụ na-eme ya adịghị mfe ma ọlị iji ya nke ọma were otu akama ọ bụ. Nha a bụ uru na ọkwa nke ihe oyiyi anyị nwere ike ịnụ ụtọ na ihuenyo mgbe anyị na-abanye na surfntanetị ma ọ bụ nwee egwuregwu, foto ma ọ bụ vidiyo, mana ọ na-eme ka o sie ike ijikwa na na-amanye ọtụtụ ndị ọrụ iji aka abụọ. Iji hụ nkọwapụta teknụzụ niile nke iPhone 6 Plus, gaa na weebụsaịtị T-Mobile.
Lee, anyị ga-enye gị ụfọdụ Atụmatụ na usoro iji nwee ike iji iPhone 6 Plus na otu aka n'ụzọ ga-adaba adaba.
1 Họrọ aka kwesịrị ekwesị
2 Jide iPhone 6 Plus ka elu
3 Jiri ọnọdụ nnabata
4 Melite ọnọdụ nke ngwa
5 Họrọ ikpe ma ọ bụ jiri amamihe kpuchie ya
Họrọ aka kwesịrị ekwesị
N'agbanyeghị ma ị bụ aka nri ma ọ bụ aka ekpe, maọbụ ọ bụrụ na ị na-ejikarị ụdị ngwaọrụ a jiri aka gị ma ọ bụ nke ọzọ, a na-atụ aro ka ị pnwalee iji ekwentị na aka ọ bụla iji kpebie nke kachasị dị mma.
Jide iPhone 6 Plus ka elu
A na-eji ọtụtụ ndị ọrụ ama ama nwere nnukwu nseta ịghọta na ala. Agbanyeghị, na nnukwu ngwaọrụ, ọ kachasị mma sjide ha ntakịrị elu, gburugburu etiti ihuenyo ka i wee nwee ike rute otutu ebe ma kwado ikuchi aka elu na ala.
Jiri ọnọdụ nnabata
Ejiri Apple mepụta sistemụ a iji dozie nsogbu nke nkasi obi iji nnukwu ngwaọrụ dị otu aka. N'ihi nke ahụ ụfọdụ ọrụ ẹkenam ke iOS 8 kpọmkwem haziri maka nzube a dị ka Ọnọdụ nrụghachị ma obu "Easy Reach". Just ga-eme ugboro abụọ pịa n'ụlọ bọtịnụ ya mere na interface niile na-agagharị na ala ihuenyo ebe isi mkpịsị aka gị dị. Nke a na - enye gị ohere ịnweta ihe ọ bụla ma ọ bụ njikwa n’elu n’elu na - ejighi aka gị.
Agbanyeghị na emeghị iPhone 6 Plus ka ejiri ya rụọ ọrụ otu aka, ụlọ ọrụ ahụ ghọtara na ọtụtụ ndị ọrụ ya hụrụ ya dị ka nsogbu na ya mere Apple kpebiri ịmepụta ọnọdụ obibi iji dozie okwu ahụ n'ụzọ ụfọdụ. Ọ bụrụ na nke a ezughi gị, biko cheta ndụmọdụ ndị ọzọ a kpọtụrụ aha n'elu ka ị nwee ike meziwanye ahụmịhe gị ma rite uru niile ekwentị a nwere.
Melite ọnọdụ nke ngwa
Akụkụ a ga-adabere na aka iji iji ekwentị. Ọ bụrụ n ’iji aka nri gị mee ya, ọ ga-adịrị gị mfe ịnwe ngwa ndị ị kacha eji na mpaghara aka nri ala nke ihuenyo ahụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ aka ekpe, ọ ga-aka adịrị gị mfe itinye akara ngosi ngwa ahụ n’aka ekpe.
Họrọ ikpe ma ọ bụ jiri amamihe kpuchie ya
Ndị ọrụ IPhone mgbe jiri ikpe ma ọ bụ ihe mkpuchi iji kpuchido ngwaọrụ gịs na ihe banyere nnukwu ngwaọrụ dịka iPhone 6 Plus ọ kachasị mma ịbanye a ebughibu shei mere nke a na-abụghị ileghara ihe onwunwe dị ka silicone. Nke a ga - egbochi ekwentị ka ọpụpụ n’aka anyị wee kwụsị n’elu ala mgbe anyị tụdara ya n’akụkụ iji ruo isi gafere na ihuenyo ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » iPhone » Muta otu esi eji iPhone 6 Plus Otu aka
Ndị nyocha nchekwa na-achọpụta ọtụtụ ntụpọ na OS X na Safari n'oge Pwn2Own 2016
Apple Pay nwetara nkwado maka ụlọ akụ ọhụrụ na China na United States